Misy tra-bonjy… politika amin’ny traboina | NewsMada
Misy tra-bonjy… politika amin’ny traboina
Par Taratra sur 09/01/2018
Misy tra-bonjy ihany ny traboina amin’izao? Eo ny vonjy aina, vonjy rano vaky… Mba misy ny tra-pamonjena amin’ny fanomezan-tanana, fizarana fanampiana… Voin-kava-mahatratra! Eny, mety tsy mahahenika ny rehetra aza ny fanampiana. Misy ny tany lavitra fanjakana, na tsy hita sy tsy fantatra akory ny voina mahazo azy?
Na ahoana na ahoana, tsy hahavita taona izay fanampiana. Tsetsetra ny an’ny hafa mahalala sy mahita ny fahavoazana, fa saika miady sy mitady irery hatrany izay hiarenana ny traboina mandavantaona. Na izany aza, sitrany ahay: aleo misy kely toy izay tsy misy. Nefa izay fanomezana fanampiana izay no hararaotin’ny sasany.
Amin’izao voina manjo ny mpiray tanindrazana izao tokoa, matetika no hararaotin’ny mpitondra sy ny mpanao politika sasany: isehosehoana sy isekosekoana fa mahatsiaro sy mamonjy vahoaka izy. Misy ny faritra tsy hita izay itsidihana azy, raha tsy misy fotodrafitrasa hatao na hotokanana? Fanararaotra izao fahavoazana izao…
Amin’izay fanampiana izay, saika ny mpanome hatrany no asongadina amin’izay hoe omeny sy ny fampanantenana izay mbola hataony: tra-bonjy politika? Eny, na mety ho fanampiana avy amin’ny fanjakana foibe aza izany, na avy amin’ny vahiny any ivelany. Mila hohadino izay kely omena na ny tra-pahavoazana anomezana azy.
Amin’izao taom-pifidianana izao, misy aza ny fanonontononana anarana olon-tokana na antoko politika tokana hoe tsy manadino, mahatsiaro, mamonjy… Tsy inona fa karazana fandokafan-tena, mba tsy hilazana hoe fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Ndrao misy hanahy hoe faly amin’ny fahorian’ny hafa.
Na ahoana na ahoana, misy faritra sy vahoaka ifotony tsy voatsidiky ny mpitondra raha tsy amin’ny fahavoazana toy izao. Tsy amin’izany ve ny tena tokony hijerena izay tena olana fototra mahatonga ny fahavoazana? Na rano tondraka, na lalana tapaka, na fefiloha vaky… Amin’izay, mba tena ho tra-bonjy tokoa ny traboina.